Xooghayaha Xizbu Allaah oo ganafka ku dhuftay qaraarka kasoo Baaritaankii Dilkii Rafiq Al xariiri. – SBC
Xooghayaha Xizbu Allaah oo ganafka ku dhuftay qaraarka kasoo Baaritaankii Dilkii Rafiq Al xariiri.
Posted by editor on July 3, 2011 Comments
Xoogahaya guud ee Ururka Xibu Allaah ee Dalka Lubnaan Sheekh Xasan Nasra Allaah ayaa sheegay in xisbigooda aanu marnaba aqbalayn raalina aanu ka ahayn qaraar kasta oo kasoo baxay Maxkamada Dowliga ee ku howlanayd baaritaankii Dilkii Raysal Wasaarihii hore ee Lubnaan Rafiiq Al xariiri.
Sheekh Xasan Nasra Allaah waxaa uu ku tilmaamay Maxkamada in ay tahay Cadow u shaqaynaysa Israel,aanayna ogolayn Madaxdooda,sharcigooda iyo weliba wax kasta oo kasoo baxa.
Sheekh Xasan Nasra Allaah oo ka hadlayay Taleefishinka ayaa sheegay in ay jiraan dad doonaya isku dhaca Suniyiinta iyo Shiicada Lubnaan,marna raali ka ahaan mayno ayuu yiri Sheekh Nasra Allaah.
Hadalka Xoogahayaha Ururuka Xisbu Allaah ayaa kusoo aadaya Xili Maxkamada Dowliga ah ee qaabilsanayd baaritaanka Dilkii Raysal Wasaarihii hore ee Libnaan Rafiiq Al xariiri ay sheegtay in ay ku wareejinayso dowlada Lubnaan dadka lagu tuhmayo in ay ka dambeeyeen Dilka,iyadoona Afar kamid ah Ururka Xizbu Allaah ay ku jiraan qaraarka Maxkamada.
Maxkamada Khaaska ah ee ku howlanayd baaritaanka Dilka Rafiiq waxaa ay mudo dheer sheegtay in ay ku daba joogtay saraakiil sarsare oo u dhashay dalkaasi Lubnaan,gaar ahaana looga shakisanaa in ay qayb ka ahaayeen dilka Raysal Wasaaraha.
Bishii February ee sanadii 2005 ayay ahayd Markii Bam loo adeegsaday dilkii Rafiiq uu kula qarxay gaarigiisa bartamaha Libnaan,iyadoona 22 qof oo kale ay la geeriyoodeen.